बेल्जियममा शरणका लागि कसरी आवेदन दिने?
नोभेम्बर 6, 2020 मैत्री झा बेल्जियम, शरणार्थीहरू
के तपाइँ बेल्जियम मा शरण को लागी आवेदन गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ? तपाईंले शरणार्थी महासन्धि पूरा गर्नुभयो भने मात्र बेल्जियममा शरणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यदि तपाईं आफ्नै देशमा सतावटको डरको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। बेल्जियम बग्छ